Lammaane Booliska Hindiya ahaa oo Shaqada Lagaga Eryey Been Yaab Leh oo ay Sheegeen | Maankaab.com
Lammaane Booliska Hindiya ahaa oo Shaqada Lagaga Eryey Been Yaab Leh oo ay Sheegeen
Delhi (MK/W.Wararka)- Lammaane ka tirsanaa booliska dalka Hindiya, ayaa shaqada lagaga eryey kadib markii lagu eedeeyey inay sheegeen been la yaab leh.
Labada askari ee booliska dalka Hindiya ayaa shaqada laga eryey, kadib markii ay ka been sheegeen in ay fuuleen buurta adduunka ugu dheer ee Everest, iyadoo uu beentaasi ku qiray guddi baadhitaan oo loo saaray sheegashadooda.
Mr. Dinesh iyo xaaskiisa Tarakeshwari Rathod, ayaa sheegtay sannadkii hore inay noqdeen lammaanihii ugu horreeyey boolis ah ee ku guulaysta inay fuulaan buurta caalamka ugu dheer ee Everest oo ku taal dalka Nepal.
Hase ahaatee, baadhayaal ka tirsan booliska Gobolka Maharashtra ee waddanka Hindiya, ayaa xaqiijiyey in labadaas askari sheegashadaas ka been sheegeen, isla markaana sawirrada ay soo bandhigeen ahaayeen qaar been-abuur ah oo aan waxba ka jirin.
Sarkaal u hadlay bilayska Gobolka Maharashtra oo lagu magacaabo Sahebrao Patil, ayaa sheegay in lammaanahani ciidanka booliska dalka Hindiya u soo jiideen sumcad-darro iyo muran aan loo baahnayn, sidaa darteedna shaqada looga eryey.
Sidoo kale, dawladda dalka Nepal ayaa lammaanahan ku soo rogtey mamnuucis muddo 10 casho ah oo ku saabsan in ay fuulaan buuraha waddankooda, maadaamaa ay been sheegeen.
Labada askari ee shaqada laga caydhiyey, ayaa shir-jaraa’id oo ay qabteen caasimadda Delhi ee dalka Hindiya maalintii Salaasada ee toddobaadkan waxay ku adkaysteen in sawirrada ay soo bandhigeen yihiin kuwa sax ah, sidaa awgeedna xuquuqdooda shaqo lagu gefay.
Balse nin buuraha fuula oo la yidhaa Satyarup Sidhantha, ayaa warbaahinta u sheegay in sawirrada lammaanahaasi isticmaaleen yihiin kuwa uu isaga leeyahay, isla markaana been-abuur ku sameeyeen.
Waxa sheegashada labadaas askari mugdi sii gashay kadib markii la ogaaday in dhar iyo kabo kala duwan ay xidhnaayeen sawirrada, taasoo sii caddaysay shakigii hore looga qabay arrintooda.
Dadka buuraha fuula ayaa marka dambe hela shaqooyin lacag badan ay ka soo gasho sida khudbado dhiirrigalin ah oo ay ka jeediyaan jaamacadaha iyo waliba qorista buuggaagta.
Dalka Nepal ayaa dhaqaale badan ka hela dalxiisayaasha buuraha fuula, iyada oo dad gaadhaya 450 qof fuuleen buurta Everest oo dherer ahaan dhan 8,848 mitir sannadkii hore oo kaliya.